दशैंको दिनगन्ती शुरू हुनासाथै विभिन्न देशमा रहेका नेपाली समुदायको व्यग्रता बढ्छ । त्यो व्यग्रतामा दशैं मनाउने हतारोसँगै कामबाट विदा कसरी मिलाउने भन्ने पिरलो मिसिएको हुन्छ । कामकाजी व्यक्तिको समस्या एकछिन थाती राखौं र अमेरिकाको भर्मन्ट राज्यका नेपाली समुदायका बालबालिकाको कुरा गरौं ।
यी बालबालिकालाई दशैंको टीकाको दिन विद्यालयले विदा दिन्छ । बर्लिङ्गटन स्कूल डिस्ट्रिक्ट र पेन्सलभेनियाको पिट्सवर्ग स्कूल डिस्ट्रिक्टले आफ्नो शैक्षिक क्यालेण्डरमा अक्टोबर १९ लाई ‘विजयादशमी’ वा ‘दशैं’ उल्लेख गरेका छन् । यस दिन स्कूल विदा नभए पनि दशैं मनाउने विद्यार्थी नआउँदा गयल भएको मानिंदैन । संवेदनशील स्कूल नीतिले यस्ता दिनमा विद्यार्थी गयलको विषयमा धार्मिक आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बालबच्चा स्कूल जानु नपरेको सजिलो आफ्नो ठाउँमा छ भने बाबु–आमालाई कामबाट छुट्टी लिनुपर्ने अवस्था पनि छ । केन्टकी राज्यको लुइभिलका डा. लक्ष्मीनारायण ढकाल भन्छन्, “विदा तानतुन गरी मिलाएर दशैं मनाउनु यहाँको विशेषता भएको छ ।” केन्टकीमै बस्ने राजु तिमल्सिना पनि दशैं विदाको आशमा छन् । लेक्जिङ्गटनस्थित अमेजनको वितरण भण्डारमा काम गर्ने उनी भन्छन्, “हाम्रो ठूलो चाड हो भनेर विदा मिलाउन व्यवस्थापनसँग प्रस्ताव राखेका छौं । व्यवस्थापनले सकारात्मक मानेको छ ।” Read More »
अमेरिकामा बस्ने नेपाली, नेपाली भाषी भूटानी र बर्मेलीहरू मौलिक नेपाली डिजाइनका सुनका गहना मन पराउँछन् । केही वर्षअघिसम्म अमेरिकामै यस्तो गहना खरीदको सुविधा थिएन । सन् २००८ मा नेपालमा रहेका भूटानी शरणार्थीको अमेरिका पुनर्वासपछि भने नेपाली गहना पसल प्रशस्तै खुलेका छन् । व्यवसाय र गहना पारखी बढेसँगै लूटका घटना पनि हुन थाले । Read More »
After two decades of living in bamboo sheds in camps in eastern Nepal, refugees from Bhutan resettled in the United States have found that adjustment to life inanew country is easier if they can live and work among their own people.
After being evicted from Bhutan in the early 1990s, being stateless in refugee camps in Jhapa and Morang for so long, more than 100,000 Bhutanese have been resettled in seven countries around the world, with the United States taking most of them.
After adjusting to culture shock, and overcoming the language barrier, most of them here have found jobs in large American companies so that they can live, commute and work together.
Narayan Gautam is among 200 Bhutanese who work at the large clothing chain Nordstrom in Harrisburg of Pennsylvania. Gautam and other Bhutanese who worked for Apple, DB Schenker, and Aerotech have all switched en masse to Nordstrom, which has policy to make it easier for immigrants to fit in.
एकै थलोमा धेरै अवसर
”यहाँ हामी २०० जनाभन्दा धेरै छौं होला”, पेन्सलभेनिया राज्यको ह्यारिसवर्गस्थित नोर्डस्ट्रम मा कार्यरत नारायण गौतमले भने । नोर्डस्ट्रम अमेरिकाको तयारी कपडा कम्पनी हो, जसका १४ वटा राज्यमा वितरण भण्डार (फुलफिलमेन्ट सेन्टर) छन् । ह्यारिसवर्गमा चाहिं यसको ‘इस्ट कोस्ट फुलफिलमेन्ट’ सेन्टर छ । एप्पल, डीबी स्केन्कर, एरोटेक लगायतमा काम गरिरहेका गौतम सहितका नेपाली–भाषी भूटानी नोर्डस्ट्रममा सरेका हुन् ।
म्यासाच्युसेट्सको हाभरहिलस्थित साउथविक नामक कोट कारखानामा २४ जना भूटानी काम गर्छन् । चार वर्षदेखि यहाँ कार्यरत पञ्चबहादुर गुरुङका अनुसार पहिले यहाँ करीब ६० जना भूटानी थिए । बसाइँसराइ र अन्य अवसरले गर्दा साउथविक मा काम गर्नेको संख्या भने पातलियो । टेक्सस राज्यमा फेडेक्स को वितरण भण्डार, न्यूयोर्क रोचेस्टरको डेरी फार्म र भर्मन्टको चकलेट फ्याक्ट्री लगायतमा हजारौं भूटानीले काम गरिरहेका छन् । Read More »
४० वर्षमा विश्वव्यापी
डेविड वर्नरले स्वास्थ्योपचारको कुनै उपाय नभएका दुर्गमका मानिसहरूका लागि डाक्टर नभएमा पुस्तक लेखेका थिए । सन् १९७३ मा पहिलो संस्करण प्रकाशित हुँदा यो पुस्तक स्प्यानिश भाषामा थियो, दोन्दे नो हाइ दक्तर शीर्षकमा । सन् १९७७ मा त्यसको पहिलो अंग्रेजी अनुवाद आयो, ह्वेयर दियर इज नो डक्टर । अहिले नेपालीसहित ९० भाषामा अनूदित भइसकेको यो पुस्तकको प्रभाव कति छ भने संसारमा अरूले यस्तै नामका अनेकौं किताब निकालेका छन् ।
वर्नरको पुस्तकलाई शुरूमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), युनिसेफ, क्रिश्चियन मेडिकल कमिसन, युएसएआईडीलगायतका संस्थाहरूले अस्वीकृत गरेका थिए, ‘अल्पज्ञान खतरनाक हुन्छ’ भन्दै । तर मान्छेहरूले यसलाई चलाउन थाले । “किताब फैलियो”, गर्मी छल्न अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट न्यू ह्याम्सर राज्यको सिल्भर लेकस्थित पुख्र्यौली घर आएका वर्नरले भने, “अनि डब्ल्यूएचओ र युनिसेफले पनि यसको अंग्रेजी अनुवाद गराउन दिए ।”
जगदम्बाको पात्रो २०७५
२०७५ सालको जगदम्बाको भित्तेपात्रोका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । © Jagadamba Press
नानीहरूलाई नेपाली पढाउने सामग्रीहरू
नानीहरूलाई नेपाली-भाषा पढाउनुहुन्छ भने यहाँ केही सामग्रीहरू छन्, क्लिक गर्नुहोस् ।
यहाँ नेपालमा पढाइने पाठ्यपुस्तकहरू, बालसाहित्यका केही पुस्तक, केही बालगीत, आदि राखिएका छन् ।
यी सामग्री जस-जसका हुन्, उनीहरूका सम्पत्ति हुन् ।
मैले परदेशमा नेपाली-भाषा जोगाइराख्न मात्र संकलन गरेको हुँ ।